IMagento vs osCommerce vs Ukuqhathaniswa kwe-OpenCart
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 26, i-2013 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, i-2015 Douglas Karr
Ukuthengiswa kwe-ecommerce emhlabeni wonke kukhula nge-19% ngonyaka futhi kunganciphisi ijubane noma kunini. Lokhu infographic kusuka Forix Web Design iqhathanisa amapulatifomu amathathu aholayo - iMagento, i-osCommerce ne-OpenCart, ukusiza abasebenzisi ukuthi bakhethe ukuthi iyiphi ipulatifomu ye-ecommerce engaba engcono kakhulu kusayithi labo lezinqola zokuthenga.
Amathathu la mapulatifomu aphezu kwamandla ngaphezu kwe-30% yemakethe. Ngenkathi kunezinketho eziningi ezikhona laphaya, usebenzisa ipulatifomu eyamukelwe kahle ye-ecommerce enomphakathi omkhulu wokuthuthuka nokusekela ingakunika onqenqemeni oludingayo. Zishesha kakhulu ekwamukeleni amasu amasha - noma ngabe kunjalo amazwibela acebile or ukusetshenziswa kweselula.
Tags: ezokuhweba ngekhompyuthaukuqhathanisa kwe-ecommerceMagentomagento vs i-opencartmagento vs oscommerceukuvulaoscommercei-oscommerce vs i-opencart
Ngoba iGoogle Isho kanjalo
May 23, 2013 ku-2: 51 AM
Sawubona Douglas, lokhu ukuqhathanisa okuhle. Engingakuqondi ukuthi yi- "X" @ “Magento -> Statistics”. Ngisho ne-edishini ye-CE ihlinzeka ngemibiko eminingi, okungukuthi, izinqola ezilahliwe, abathengisi abaphezulu, amakhasimende aphezulu njalonjalo.
May 23, 2013 ku-10: 27 AM
Iphuzu elihle, @ google-65b2531b86017a5e6a499632b90ed9ce: disqus. Anginaso isiqiniseko sokuthi nami ngizoba ne-X'd. Mhlawumbe bekumane kuqhathaniswa nezinye izinqola.
May 24, 2013 ku-4: 41 AM
I-osCommerce ingumlando, imithetho yeMagento yezitolo ezinkulu. I-OpenCart ne-PrestaShop zilungele ezincane. Ngincome kakhulu kuwo wonke amaklayenti ami ukuthi asuke ku-osCommerce aye eMagento, Presta noma ku-OpenCart. Uma uku-osCommerce - qhubekela phambili
I-Transpacific Software Pvt. Ltd
Jun 24, 2013 ku-12: 18 PM
"IMagento ilungele amasayithi amakhulu" futhi "I-Opencart ilungele i-
okuncane ”HHAYI IQINISO
Ngikufundile lokhu ku
izindatshana eziningi ze-blog bhala phezulu. Okuhlangenwe nakho kwethu kuphambene.
indawo enkulu yokudayisa idayimane ku-OpenCart naseMagento. Futhi yathola ukuthi "i-OpenCart" isebenza kahle kakhulu.
IMagento hogs ukucubungula okuningi kweseva nokuningi ngaphezu kwe-approx. 20,000
imikhiqizo DB Inkomba iyabamba. Ezitolo ezilawulwa ngokwakho ezifunda ijika lesitolo se-magento
Umnikazi wehle kakhulu .Izandiso ze-OpenCart zishibhile futhi ziningi.
Jan 27, 2014 ku-8: 35 AM
Ngaphezu kwalokho abantu abangama-90% bayazi ukuthi i-magento iphezulu futhi iningi labantu linje. okusele ngo-10% angikuthandi nje ngenxa yethempeli lalo. Kepha noma kunjalo bayayithuthukisa .. yingakho abantu abasalayo nabo besuka kuwo wonke amanye amapulatifomu beya kuma-magent.
Okthoba 6, 2014 ngo-9: 48 AM
fyi inguqulo yakamuva ye-opencart yi-2.0 hhayi i-3.0.2.
Ngo-Apr 28, i-2015 ku-5: 45 AM
Ukuqhathanisa okuhle. Akungabazeki ukuthi isixazululo seMagento Ecommerce singcono kakhulu ngenkathi i-oscommerce iyisixazululo esidala. Abantu manje sebethuthela ezixazululweni ezintsha nezisebenza kahle kakhulu.